चर्चित सिलियल ‘जोधा अकबर’ की पात्र जोधा आजभोलि कहाँ छिन ? बनिसकिन एउटा बच्चाको आमा , कस्ता छन उनका श्रीमान ? – Jagaran Nepal
चर्चित सिलियल ‘जोधा अकबर’ की पात्र जोधा आजभोलि कहाँ छिन ? बनिसकिन एउटा बच्चाको आमा , कस्ता छन उनका श्रीमान ?
काठमाडौं । हरेक दिन टिभी दुनियाँ मा केहि नयाँ सीरियलहरु आउछन्, तर केहि सीरियलहरु यस्ता हुन्छन जसले सबैको दिल मा एक स्थान बनाउन सफल हुन्छ। जोधा अकबर पनि एक यस्तो दैनिक शो थियो जो प्रत्येक घर मा आफ्नो आफ्नै स्थान बनाउन को लागी व्यवस्थित गरीयो।
यस सिरियल को दुबै मा मानिसहरु यो सिरियल को शुरुवात को लागी पर्खिरहेका थिए। जोधा अकबर देश भर मा आफ्नो पहिचान बनाउन सफल भयो ।यो एक ऐतिहासिक शो थियो। जोधा र अकबर को प्रेम कहानी मा बनेको यो सीरियल यति प्रसिद्ध थियो कि टीआरपी धेरै दिन सम्म टीभी मा नम्बर एक बनेको थियो। जोधा को चरित्र यो शो मा मुख्य पात्र हो। र परिधी शर्मा, जसले यो चरित्र निभाईन्, उनको दमदार अभिनयले सबैको मन जित्यो। यी अभिनेत्री को घर घर मा पहिचान भएको थियो।
परिधी शर्मा अब ३५ वर्षकी भैसकेकी छिन्। उनी विवाहित छिन् र अहिले एक छोराकी आमा हुन्। परिधिको जन्म १९८७ मा इन्दौर शहर मा भएको थियो। परिधिले २०१० को टिभी धारावाहिक ‘तेरे मेरे सपना’ बाट टिभी दुनियाँमा अभिनयको सुरुवात गरेकी थिइन्। तर उनले आफ्नो वास्तविक पहिचान २०१३ मा शुरू भएको शो ‘जोधा अकबर’ बाट पाएकि थिईन ।
आफ्नो क्यारियर मा मान्यता प्राप्त गरेपछि, परिधि एक बर्ष को भित्रमा अहमदाबाद सर्वश्रेष्ठ व्यापारिक पुरुष तन्मय सक्सेना संग विवाह गरिन । विवाह गरको ५ बर्ष पछि उनीहरुका एक छोरा छन् । यस क्रममा उनले अभिनयबाट ब्रेक लिईन र आफ्नो परिवारलाई समय दिन थालिन । आज उनको छोरा ५ बर्षको भयो।
उनको छोराको नाम रिधर्व हो। एउटा बच्चाको आमा बने पनि उनी एकदम फिट र स्लिम छिन्। उनी आफ्नो फिटनेसको विशेष ख्याल राख्छिन्। परिधि सामाजिक सञ्जालमा धेरै सक्रिय छिन्। हरेक दिन उनी आफ्नो इन्स्टाग्राममा आफ्नो छोरा र पति संग आफ्नो तस्वीरहरु साझा राख्छिन ।